विचार Archives - Mero Sabda
(समय सन्दर्भ) – दीपक ढकाल ऐतिहासिक निर्णय कसैका लागि, कसैका लागि अन्यायपूर्ण र क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गरिएको कलसित निर्णय । अनि कसैका लागि अदालतमा गोरु व्याएको जस्तो निर्णय । असार अठ्ठाइस गतेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले […]
(समय सन्दर्भ) – दीपक ढकाल राम कट्टेल । अर्थात् नेपाली कांग्रेस झापाको सभापतिका लागि आफैले घोषणा गरेको एउटा नाम । देउमान थेवे । अर्का उम्मेद्वार । राजेन्द्र घिमिरे । फेउरि अर्को उम्मेद्वार । यसै यसै […]
अब फेरि कांग्रेस महाधिवेशन र विरासत
(समय सन्दर्भ) – दीपक ढकाल चर्चा अहिले दुई वटा विषयमा केन्द्रिकृत भएर अगाडि बढेको छ । पहिलो राजनीतिक चर्चा–परिर्चा भनेको खड्गप्रसाद ओलीको राजनीतिक धरातल, सम्मानित सर्वोच्च अदाल, संसद पुनःस्थापना, नयाँ सरकारको सम्भावना वा मध्यावधि निर्वाचन […]
कांग्रेस, विरासत र महाधिवेशन
(समय सन्दर्भ) – दीपक ढकाल यतिखेर नेपाली राजनीति पक्ष–प्रतिपक्ष बीच भन्दा पनि पक्ष र पक्षहरुबीच नै बढी चर्चामा छ । सत्ता पक्षीय राजनीतिको चर्चा स्वयं उनीहरु बीच र समग्र नेपाली समाज तथा नेपाली राजनीति बीच […]
दोहन आमा र आमाहरुको
(समय सन्दर्भ) – दीपक ढकाल निरन्तरताको भंग स्वरुप हो ‘फर्किएको अवस्था’ अर्थात् पुनरागमन लेखनकार्यको । मलाई घच्घच्यायो दोहन शब्दले । यो नेपाली शब्दकोषको निक्कै ओजनदार शब्द तर अति कम प्रयोगमा आएको । मैले पहिलो पटक […]
बैशालीकी नगरबधुः एक मिमांशा
– शान्तिप्रिय ऋषि प्रमूख पात्रहरु तथा स्थानहरु वैशालीका महानामन्, देवी अम्बपाली, सिंह, युवराज स्वर्णसेन, युवराजको साथी सूर्यमल्ल, दस्यु बलभद्र (सोमप्रभ), कृतपुण्य सेठ (हर्षदेव), कृतपुण्य का पुत्र भद्रगुप्त, महाबलाधि‍कृत सुमन, सेनापति सिंह, उपसेनापति, संधि‍वैग्राहिक जयराज, रशायनशास्त्री […]
सडक निर्माण… मेयरलाई विन्ती
– रामबाबु सुबेदी धुलाम्मे भद्रपुर रोडमा बाटामा लामो हरियो गाउन लगाएकी, कालो रेबनको चश्मा भिरेकी र मास्कले मुख छोपेकी एउटी केटी हिंड्दै छे । मास्कबाहिर हरियो स्कार्फले मुख र टाउको नदेखिने गरी छोपेकी केटी हिंड्दै […]
छोरी चाहिं किन चाहिंदैन ?
– प्रजिता शिवाकोटी सर्बप्रथम त मलाई गर्व लाग्छ कि म यस धर्तीमा छोरी भएर जन्म लिन पाएँ । तर दुःख पनि लाग्छ छोरीहरुलाई अवहेलित गरिएको खबरहरु अर्थात् घटनाहरु सुन्दा । किनकि कतिपय मानिसहरुले छोरीहरुलाई नराम्रो […]
– आरती आचार्य कुनै एक मात्र भए पनि नेपाली चाड जहाँ सम्पूर्ण पुरुष जातिले नारी जातिको दीर्घायुको कामना गरी मनाउन पाइयोस् । त्यस्तो कुनै चाड छ ? नेपाली समाजका हरेक चाडमा बीचमा खोई कताबाट निमित्त […]
के पुरुष यौन हिंसामा पर्दैनन् ?
– कुमार भट्टराई यो कुरा कति सान्दर्भिक हुन्छ, थाह छैन । तर, यौन अपराधका कुरा उठिरहँदा कहिल्यै नउठाएको पुरुष यौन हिंसाको विषयमा उठान पनि जरुरी हुन्छ भन्ने लागेर केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ । कसैले […]